Manana ny « Certificat Européen sur la construction de navire »
Anisan’ny orinasa manana ny lazany eo amin’ny fanamboarana ireo fitaovana fampiasa andavanandro vita amin’ny plastika ny gropue SMTP na Société Malgache de Transformation des Plastiques eny Ambohbao. Ny taona 1996 no niforona ny SMTP, izay tantanin’Atoa Isamel Danil.
Zava-baovao ataon’ity orinasa ity ny fanamboarana lakana vita avy amin’ny plastika”polyester”. Teo amin’ny enim-bolana izao no nanombohan aity fanamboarana lakana ity. Karazana lakana maro misy “balanciers” roa, ny karazna lakana antsoina hoe “Ango 700”… Samy afaka mitondra olona izy ireto ary manana ny “Certificat Européen sur la construction de navire”.
Ango 700, vokarin'ny SMTP (Sary : Nanouh)
Amin’izao fotoana dia ry zareo ao amin’ny SAF/FJKM no mampanao lakana maromaro ao amin’ny SMTP mba ho entina miomana sahady amin’ny fiatrehana ny fahavaratra ary hanamora ny vonjy taitra hanvotana ny mponina raha sanatria misy ny tondra-drano. Tafiditra ao amin’ilay tetikasa andrana « Rarivato » izany.Nanamarika ny tompon’andraikitra tafaresaka taminay fa ny « polyester » no akora nosafidiana hanamboarana ny lakana noho izy io maivana sady azo amboarina raha sanatria misy fahavoazana mahazo azy. Maharitra eo amin’ny 50 taona mahery ny lakana iray vita amin’io akora io.Amin’ny ankapobeny dia mahavita lakana efatra eo ho eo anatin’nyb roa volana ny SMTP. Marihina fa ny zavatra vokarin’ny SMTP rehetra dia tsara kalitao ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena avokoa.